बिग्रिएको अंगहरुको मर्मतका लागि खानैपर्ने खानेकुराहरु | Ratopati
बिग्रिएको अंगहरुको मर्मतका लागि खानैपर्ने खानेकुराहरु
स्वस्थ खानेकुरा स्वादिष्ट मात्र होइन, पोषक तत्वले भरिपूर्ण हुने भएकाले शरीरले गर्ने कार्यलाई पनि सही बनाउँछ । यसले बिग्रिएको डिएनएलाई फेरि मर्मत गर्छ । यसले अंगको कार्यक्षमतालाई नै तन्दुरुस्त बनाउँछ । तनाव कम गर्न र मस्तिष्कको कार्यलाई सही बनाउन स्वस्थकर खाना खान आवश्यक छ । होलिस्टिक लाइफस्टाइल एण्ड वेलनेस कोच ल्यूक कौटिन्होका अनुसार स्वस्थकर खानेकुराले हाम्रो शरीरको भित्रि अंगहरुलाई मर्मत गर्ने र डिएनए हेल्थलाई सन्तुलनमा राखेर क्रोनिक र जेनेटिक रोगहरुबाट बचाउँछ । यसले इन्फ्लेमेशनको जोखिम कम गर्छ । र, सम्पूर्ण स्वास्थ्यलाई सहायता गर्ने र रोगप्रतिरोधी क्षमता सुधार गर्छ ।
अनारमा गुणकारी तत्वहरु पाइने भएकाले यसलाई स्वस्थकर खानेकुराको रुपमा लिइन्छ । रातो रंगको हुने यो फलमा भिटामिन सी, आइरन, ओमेगा–३ फ्याटी एसिड, फोलेट, पोटाशियम र भिटामिन–के को सही स्रोत हो । अनार मुटु रोगका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । यसले क्यान्सर, आर्थराइटिस र कुनै पनि इन्फ्लेमेटरी कन्डिशनको खतरा पनि कम गर्छ । यसमा हुने एन्टि–एजिङ पदार्थले छालाको अवस्थालाई सही बनाउँछ ।
नरिवलको तेल खाना बनाउँदा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले शरीरलाई विभिन्न प्रकारका फाइदाहरु गर्ने गर्छ । नरिवलको तेलमा हुने एन्टिमाइक्रोबियल र एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टीजले हाम्रो छालाको अवस्थालाई र मुखको स्वास्थ्य अवस्थालाई फाइदा गर्छ । यसले तौल नियन्त्रण गर्न पनि मद्दत गर्छ । छालामा हुने एलर्जीबाट पनि बचाउँछ । यसको सेवनले लामो समयसम्म भोक लाग्दैन ।
लामो र स्वस्थकर जीवनका लागि च्याउलाई एकदमै फाइदाजनक तरकारीको रुपमा लिइन्छ । च्याउलाई क्यालोरी, फाइबर र प्रोटिनको सही स्रोत मानिन्छ । यसले छाला, मुटु, जोर्नी र धेरै प्रकारका अंगहरुसँग जोडिएको रोगबाट बचाउँछ । यसले क्यान्सर, मुटुरोग, मधुमेह जस्ता रोगहरुबाट बचाउँछ ।
बेसारको उपयोग सबैको भान्सामा अनिवार्य प्रयोगमा आइरहेको हुन्छ । बेसारमा करम्यूमिन नामक सक्रिय कम्पाउन्डमा एन्टिइन्फ्लामेटरी र एन्टिअक्सिडेन्ट जस्ता तत्वहरु पाइन्छ । यो छालासँग, मुटुसँग र जोर्नीसँग जोडिएको हुन्छ । डाक्टरका अनुसार बेसार क्यान्सर, अल्जाइमर, डिप्रेशन र आर्थराइटिस जस्ता रोगहरुमा फाइदा गर्छ । यसलाई दूधसँग सेवन गर्न सकिन्छ ।
ग्रिन टी रिफ्रेसिङ र हाइड्रेटिङ पेय पदार्थ मात्र होइन । यसमा भरपुर मात्रामा ड्रिंक इनफ्लेमेशन र क्यान्सर जस्ता रोगहरुसँग लड्न मद्दतगार मानिन्छ । ग्रिन टीले मेटाबोलिज्म बढेर फ्याट घटाउन काम गर्छ र यसले रेडिकल बिग्रिएको कोशिकाहरुबाट बचाउँछ ।
ओमिक्रोन किन हो ‘सुपर माइल्ड’ भेरियन्ट ? युवा सबैभन्दा बढी संक्रमित, यसको ठूलो खतरा के ?
अ‍ाेमिक्राेनलाई अहिले प्रयोगमा अ‍ाएकै खोपले काम गर्छ: डब्लूएचओ